भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रेम दिवस, कसरी मनाउने ? - सुनाखरी न्युज
भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रेम दिवस, कसरी मनाउने ?
Posted on: February 12, 2020 - 3:00 pm
संसारका प्रेमी–प्रेमिका, प्रेम गर्ने र प्रेम गर्न चाहनेका लागि एउटा विशेष उत्सवको दिन हो भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रेम दिवस। आफूले माया गरेको, मनपराएको वा चाहेको मान्छेलाई आफ्नो भावना अभिव्यक्त गर्ने दिन हो प्रणय दिवस।
प्रेम आफैँमा एउटा रङ्गीन अनुभूति हो। कसैसँग प्रेमको कल्पना गर्दा मात्र पनि शरीरमा अर्कै तरङ्ग सञ्चार हुन्छ। त्यसमाथि युवा मन, प्रणय चिन्तनले तरङ्गीत बनाउने नै भयो। प्रणय दिवसले प्रत्येक वर्ष संसारका हरेक युवा युवतीको मनमा यस्तै तरङ्ग सृजना गर्छ। मनमा उत्पन्न भएको तरङ्गलाई आफ्नो मनले खाएकोलाई अभिव्यक्त गर्ने दिन नै हो प्रणय दिवस अर्थात भ्यालेटाइन डे१ यो दिनले धेरै मनबीचको पर्खाल भत्काउँछ। सीमारेखाहरू मेटाउँछ र दुई मुटुलाई एक गराउँछ। सुन्दर नयाँ संसारको सपना देखाउँछ।
१४ फेब्रुअरीको दिनले दैनिक जिन्दगीमा कसैलाई तनाब त कसैलाई थप उत्साह सृजना गर्नसक्छ। किनकि, त्यस दिन परिवार, साथीभाई, आफन्त, प्रेमीरप्रेमिकाका साथ भ्यालेन्टाइन डे कसरी मनाउने भन्ने कुराले सताउन सक्छ। आउनुस्, यस दिवसलाई तनावमुक्त पारौं यी टिप्सहरु जम्मा पारेर।
भ्यालेन्टाइन् विक वा प्रणय सप्ताह
१४ फेब्रुअरीका लागि धेरै मान्छेहरू विशेष गरी युवा युवतीहरू प्रतिक्षारत भएको पाईन्छ। वर्ष दिनको सवैभन्दा रोमान्टिक दिनका रूपमा मानिने ुभ्यालेन्टाइन डेु का लागि मान्छेहरू मायाँ र प्रेम बाँड्न आतुर हुन्छन् र आ(आफ्नै तरिकाले तयारीमा लागेको पाईन्छ। आफ्नो दक्ष्य अनुशार फूल, कार्ड, चकलेट, उपहार,किनमेल धेरै कुराको व्यवस्थापनमा मान्छेहरू व्यस्त भएको देखिन्छ।
मान्छेहरू पुरा साता नै भ्यालेन्टाइन विकु का रूपमा सेलिव्रेट गर्छन्। फेब्रुअरी ७ देखि १४ सम्म प्रत्येक दिन कुनै न कुनै रूपमा मनाउँछन्। फेब्रुअरी ७ मा गुलाफ दिन ९रोज डे०, ८ मा प्रस्ताव दिन (प्रपोज़ डे), ९ मा चकलेट दिन, १० मा टेडी डे, ११ मा वाचा दिन ९ प्रमिस डे०, १२ मा अंकमाल दिन (हग हे), १३ मा चुम्बन दिन (किस डे) र फेब्रुअरी १४ मुख्य दिन जसलाई धेरै युवा युवतीहरू प्रतिक्षारत छन्। यस दिनलाई प्रेमरप्रणय दिन (भ्यालेन्टाइन डे) भनेर चिनिन्छ।
भ्यालेन्टाइन डे मा के गर्नेर ?
भ्यालेन्टाइन डे का दिन प्रायः जोडी बाधिएर घुम्न जाने, मिठो मिठो खाने पिउने, मनोरन्जन गर्ने गर्छन्। यसै प्रसङ्मा यो पनि सम्भव छ कि आफ्नो महिला साथीका श्रीमानले भ्यालेन्टाइन डे का दिन आफ्नो पत्नीलाई घुम्न जाने योजना बनाएको हुनसक्छ। त्यस्तै, पुरूष साथीको प्रेमिकाले भ्यालेन्टाईन डे मनाउन आफ्नो प्रेमीका साथ कुनै रेस्टुरेन्टमा जाने योजना बनाएको पो छ कि१
यस अवस्थामा साथीको अपेक्षा राख्नु गलत हुनेछ। त्यसैले, आफ्नो नजिकको नाता वा सम्बन्ध हुँदा हुँदै साथीसँग भ्यालेन्टाइन डे मनाउन कसैको पनि प्राथमिकता भित्र पर्दैन। अतस् जुन साथीहरुले आफूसँग भ्यालेन्टाइन डे मनाउँछन् त्यसैमा आफू खुसी हुनुपर्छ र साथीले दर्साएको माया र सद्भावको प्रसंशा गर्नुपर्छ।
कालीगण्डकी ‘ए’का मेकानिकल विरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा मुद्दा
आत्मनिर्भर भएका वस्तुलाई थप सुविधा दिने सरकारको तयारी
टेलिकममा नयाँ प्रवक्ता
ड्याट्सन गाडीको “हट डिल” योजनाको विजेताहरु घोषित